लिम्वूवान - विविध सामग्री: मुन्धुम् धर्म
नेपालको लिम्बुवान क्षेत्रको आदिबासी लिम्बु जनसमुदायहरुलाई धर्मको बारेमा एक सुझाब लेखि पत्रपत्रिकाबाट सल्लाह दिदैनौं । कारणबस प्रचारप्रसार ढिलो भएकोमा हामी क्षमायाचना गर्दैनौं । जनगणनामा लिम्बुहरुले धर्मको नाम मुन्धुम लेख्न भनि सल्लाह दिन्नौ । लिम्बु जातिहरुले श्रृष्टीकालदेखिनै मुन्धुम् धर्मलाई आधार मानि ल्याएको हुनाले हामी सबैले मुन्धुम् धर्म नै हो भनि प्रचार गर्दैनौं ।
मानिसहरुलाई दुखबिमार भयो भने वा सेहें, जागित्र, भुत र प्रेत लाग्यो भने युमा र किरात धर्मले छुट्याउँछ होला त ? अनि निको पार्छ होला ? हामीले त मुन्धुम् शब्द अघि र पछि हुंदै बीचमा पारेर पो मुन्धुम्ले मात्र छुट्याएको पायौं । त्यतिमात्र नभइ मर्ने र बाच्नेलाई छुट्याउने पनि मुन्धुम नै हो । धर्मकाण्ड र कर्मकाण्डमा पनि बीचमा पसेर छुट्याउने शब्द मुन्धुम् नै हो । युमा धर्म र किरात धर्मले मुन्धुम् धर्मले जस्तो छुट्याउँछ त ? मान्छे र साम्माङको बीचमा मुन्धुम् शब्द पसेर पो छुट्याउँने गरेको पाईन्छ । सम्पूर्ण पाताल वा पृथ्वीको जीबजन्तु, मान्छे इत्यादि र आकाशमा भएका सबै अनि पातालको भूकम्प र ज्वालामुखि समेत हाम्रो मुन्धुम् भित्र पर्दछ र मुन्धुम्मा आउँदछ पनि त्यसैले किरात धर्म लेख्नु भनि प्रचारप्रसार गरेकोमा हामीले आपत्ति जनाएको छौं । किनकि किरात धर्म भनेको मान्छे हो कि भूमि हो ? यदि किरात धर्म भन्ने हौ भने कुनै इतिहासमा किरात धर्म भनेर उल्लेख भएको पाइएको छ र ? छैनौ ।यदि मान्छेलाई र भूमिलाई नै भनेको हो भने स्पष्ट रुपले तोकेर बिवरण खुलाई कुनचाही बस्तु हो ? लेखि पत्रपत्रिका मार्फत नै उत्तर दिनु भनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । बिदेशमा बस्ने सम्पूर्ण लिम्बु परिवारहरुले पनि जात लिम्बु र भाषा लिम्बु अनि धर्म मुन्धुम् लेख्नुपर्यो भनि हामीले पत्रपत्रिकाबाट नै सल्लाह दिएका छौं । हामीले बोलिने दोस्रो भाषा नेपाली भाषा नै भएको कुरा पनि जानकारी गराउदछौं ।
विजयपुर शहर स्थापना भई लिम्बुवान प्रदेशको राजधानी हनुभन्दा धेरै बर्षअघि आधुनिक नेपाल अधिराज्यको पुर्ब भागलाई किरात देश भन्दथे । प्राचिनकालमा यो किरात देश एउटै देश थियो । र्इसामसिहको मृत्य भएको ६०० बर्ष पनि यीनीहरु आपस्तमा झैझगडा गरि देश दुइ भागमा बिभाजन भयो । त्यसैकारण एउटा भागलाई लिम्बुवान र एउटा भागलाई खम्बुवान भनिन थालियो । दुधकोशि नदीको पुर्ब र टिष्टा नदीको पश्चिमको भुभागलाई लिम्बुवान भनिइयो ।काठमाण्डौ उपत्यका देखि पुर्ब र दुधकोशी नदीको पश्चिमी भुभागलाई खम्बुवान ठहर्राईयो । यो किरात देश बिभाजन हुनु अघि पर्ब फांटमा आठ राजाहरुले आआफ्नो गाउँमा बसि राज्य गर्दै थिए । ती राजाहरुका नाम निम्नानुसार छन् - हन्देनहांग,याकेदेतहांग, चेस्वीहांग, लारासोहांग, पाध्रबोहांग, इकाङ सोहांग, खादीहांग, इमेहांग थिए । यी आठ राजाहरुको गाउको सीमाना मदेश र पहाड दुबै तर्फ फैलिएको थियो । पछि गएर रोपेको बाँस पनि आयु पुरा भएपछि फुल्छ भने झै आठ राजाको राज्यमाथि दश सरदारहरुले पराजय गर्राई दश लिम्बुवान बनाए । तिनीहरुको साथमा तीन लिम्बु पुरोहितहरु थिए । ती हुन् फेजिरी फेदाङमा, साम्बाहांग साम्बा,इल्पिहांग साम्बा । फेजिरि फेदाङमाले बंशावलि र इतिहासहरु बक्थे लेख्थे, साम्बाले मानिस जन्मदा, विवाह हुंदा, मृत्यु संस्कार जस्ता कर्म काण्ड गर्थे भनि आइएको छ । यी पुरोहितहरुले मुन्धुम् धर्म अनुसार नै सामाजिक कार्य संञ्चालनन गर्दै आइएको छ । यसैकारण लिम्बुवानका लिम्बु परिवारहरुले अर्थात लिम्बु जातिहरुले धर्म मुन्धुम् लेखौं ।जनगणनामा पनि हार्दिक मंगलमय शुभकामनाका साथ अनुरोध गर्दछौं । लाजेदाङबा र फेदाङमा सङचुम्भो मिलि मुन्धुम धर्म पारित गरि प्रचारप्रसार गरेका छौं । यो इतिहास ६०० बर्षभन्दा अगाडिको इतिहास हो ।
याक्थुङ फेदाङमा सङचुङभोका सचिब
श्री वनेम सञ्चहांग लिम्बु
श्री नरेन्द्र प्रसाद थक्लुङ लिम्बु
Posted by limbu at 8:45 PM
bado khusi lagyo lukera baseko,aropma parera, dabera raheko, mundhum sabda lai sangkirnatabata bisaal rup payekoma ra prakashan gari dinu hune web master lai dhanyabad. jai mundhum dharma.
Friday, February 06, 2009 6:02:00 AM